Mudaaharaad ka dhashay xukun maxkamad - BBC Somali
Mudaaharaad ka dhashay xukun maxkamad
Image caption Maxkamadda sare ee Hiindiya
Maxkamada sare ee dalka Hindiya ayaa tuurtay oo waxba kama jiraan ka soo qaaday dacwad looga soo horjeeday siidaynta mid ka mid ah ragii loo haystay gabar saddex sano ka hor la kufsaday oo la dilay.
Ninkan dilka iyo kufsiga gabadhaasi loo haystay ayaa berigaasi da'diisu ay ahayd 17-sano
Waxaa arinkan si weyn uga horyimid waalidka dhalay gabadha la dilay.
Maxkamada sare ee dalka Hindiya ayaa sheegtay in aanay jirin sabab dhinaca qaynuunka ah oo xabsiga loogu sii hayo ninkaasi da'da yar madaama oo uu dhamaystay mudadii loogu tala galay ee ahayd in la xukumo dadka aan qaan gaarin.
Dacwadaasi waxa maxkamada geeyey kooxo u ololeeya arrimaha dumarka.
Waxa haatan barlamaanka hor yaala qodob lagu doonayo in wax looga badalo sharciga ku saabsan xarigga dadka aan qaan gaarin, maxkamaduna waxa ay sheegtay in aanay jirin wax ay arrintaasi ka qaban karto ilaa iyo inta uu qodobkaasi sharci ka noqonayo.
Wiilkani waxa uu ahaa kii ugu da'da yaraa lix qof oo loo xukumay kufsi ay u geysteen gabar dabayaaqadii 2012-dii, taas oo kaddibna geeriyootay, waxaana xabsiga laga siidaayey wiilkani axadii waxaana gacanta loo geliyey hay'ad samofal ah si loo badbaadiyo.
Dibed baxyo waawayn ayaa ka dhacay bartamaha caasimada Hindiya, ee New Delh,i iyada oo boolisku ay qabqabteen qaar ka mid ah dadkii dibed baxayey oo ay ku jiraan waalidiintii gabadhii la kufsaday.